Waxaad ka gaari karin magaalada tareen meel kasta oo Italy, ama dheeraad ah, sida Switzerland iyo France. Waxaa jira si joogto ah, tareenada-xawaaraha sare kuwa u taga dhowr jeer maalin kasta ka soo Milan iyo Rome, laakiin sidoo kale ka Venice. safarada waxay qaadataa in ka yar laba saacadood, waxaadna helaysaa fursad aad ku aragto buuro qurux badan iyo beeraha Talyaaniga.
Sidaas diyaar aad ku raaxaysan magaalooyinka khamri Yurub waa? SaveATrain.com kaa caawin doona inaad u hesho in ay magaalo ka mid ah in Europe, soomi, cheap, iyo dhoola!
Ma rabtaa in aad Cudarada our post blog gal goobta, sidoo kale aad qaadi karto sawiro iyo qoraal iyo kaliya na siiso credit ah la link a si post blog this, ama aad halkan riix: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fwine-cities-europe%2F%3Flang%3Dso - (hoos u riixdaa si aad u aragto Code Cudarada ah)
#qamriga ugu fiican europeantravel europetravel Tranride tareenada caarada tababarka tareen safarka Talooyin safarka tareenka travelaustria travelfrance travelgermany travelitaly khamri
Waxyaabaha la sameeyo On Long Tareen Safarada